Imibuzo kaRobin Morgan: Kusuka kwiNgqungquthela yamaLungu kunye neNveli
Iingqungquthela zesintu kunye neNvelive (ngoJanuwari 29, 1941 -)
URobin Morgan uyaziwa ngokuba ngumsebhinqa kunye nokubhala kwakhe. Ungumlobi, umvelisi weeveli, kwaye uye wabhala non-fiction. Amaninzi e-anthologies akhe ayingcali ye-feminism, kuquka noDade Obunamandla.
Wayeyingxenye yeNew York Radical Women kunye ne- 1968 yaseMelika yaseMelika . URobin Morgan waba ngumhleli weNks. Magazine 1990-1993 emva kokukhonza njengomhleli onomdla iminyaka emininzi.
URobin Morgan, njengomdlali we-actress womntwana, wayenomboniso womsakazo waza wabonakala kwiinkomfa zethelevishini Ndikhumbula uMama .
Ukhethiweyo lukaRobin Morgan
• Ndingumculi kunye nepolitiki. Injongo yam ibe yinto yokwakha ezi zinto zimbini kwiingqibelelo eziqinisekisa ukusetyenziswa kolwimi, ubugcisa, ubugcisa, ifom, ubuhle, intlekele kunye nokuziphendulela ngeemfuno kunye nombono wabasetyhini, njengenxalenye yenkcubeko entsha ekhulayo esinokusinceda sonke.
• Ukuba bekufuneka ndifane nomgangatho omnye njengengqiqo yeengcamango zesinikazi, inkcubeko kunye nesenzo, kuya kuba yintsebenziswano.
• Nguye kuphela ozama ukungabikho nto onokuyifumana.
• Ungamkeli ukukhwela kwamadoda angaqhelekanga - kwaye ukhumbule ukuba bonke abantu bayaziwayo njengesihogo.
• Abasetyhini abahlali ngokwenyama okanye ngoxolo. Asikho into ekhona ngaphandle komntu.
• Ndiyindoda ebanjwe ngaphakathi komzimba wesifazane.
• Kuze kube yilapho uqala ukulwa ngesona sakho isizathu sokuba (a) uzibophelele ngokwenene ukuphumelela, kwaye (b) ube ngumlingani onyanisekileyo wabanye abantu abazabalazela inkululeko yabo.
• Kukho into echaphazelekayo ngokufuna inkululeko
• Ulwazi lunamandla. Ulwazi lunamandla. Ukufihla okanye ukugcinwa kolwazi okanye ulwazi kungabangela isenzo sobuqhophololo esichukumisiweyo njengento yokuthobeka.
• Siyindoda esetyhini esilumkisa ngayo.
• Masenze ubuxoki obufanayo ukuhlala kuwo onke amaxesha: ukuxoka kwamadoda axinzezelweyo, kunye nokuziphatha ngokwesini - uxoka lokuba kukho into enjengokuthi "amaqela okukhululwa kwabantu." Uxinzelelo yinto enye iqela labantu elenzayo ngokumelene nelinye iqela ngokukhethekileyo ngenxa yesimo "esongelayo" esabelwe yiqela eligqibela - umbala wesikhumba okanye isondo okanye ubudala, njl njl.
• Ekuhambeni kwexesha, i-Women's Liberation iya kuba ngamadoda akhululekileyo-kodwa ngexesha elifutshane kuya kuma-COST amadoda anelungelo elikhulu, okungekho banikela ngokuzithandela okanye ngokulula.
• [A] ukuguqulwa okusemthethweni kufuneka kuhokelwe ngabo, ababencitshiswa kakhulu: abafazi abamnyama, abomdaka, abomvu, abomvu, abomvu, nabomhlophe-kunye namadoda anxulumene noko okusemandleni abo.
• Ukwabelana ngesondo akusiyo iphoso labasetyhini - bulala ooyise, hhayi oomama.
• Asikwazi ukutshabalalisa ukungalingani phakathi kwamadoda nabasetyhini size sichithe umtshato.
• Ndibango ukuba udlwengulo lukhona naluphi na ixesha ixesha lesini lesini senziwa xa lingaqalwanga ngumfazi, ngaphandle kokwenene uthando kunye nomnqweno.
• Ndivakalelwa kukuba "ukuzonda umntu" ngumsebenzi wezopolitiko ozukileyo kwaye osebenzayo, ukuba abacinezelweyo banelungelo lokufundela-inzondo malunga neklasi elibacinezelayo.
• Nangona inkolo yonqulo isebenza ixesha elingaphezu kwexesha lokuba lixhase i-misogyny kwingqungquthela yowesifazane-inzondo, ukwesaba owesifazane kunye nomfazi-inkohlakalo, icawa yamaRoma Katolika nayo inamandla amakhulu kakhulu ekuchaphazela ubomi babasetyhini yonke indawo ngokuma kwayo malunga nokulawulwa kokuzalwa kunye nokukhipha isisu, kunye nokusetyenziswa kwayo kobuchule nobuncwane bokuthintela utshintsho lomthetho. Kuyinto enyanyekayo - ulawulo lwababesilisa bonke, ulawulo olungenanto okanye olungenjalo, olufuna ukulawula kwimpilo kunye nemizimba yezigidi zabasetyhini.